ESI CHỌPỤTA ONYE ỌKWỌ ỤGBỌALA CHỌRỌ MAKA KAADỊ VIDIYO - KAADỊ VIDIYO - 2019
Isi Kaadị vidiyo
Chọpụta onye ọkwọ ụgbọala dị maka kaadị vidiyo ahụ
Torrent aghọwo ezigbo ewu ewu n'ihi na ọ bara uru. Ma, ọ bụrụ na ọ dị mma, ọ ga-abịa. Dịka ọmụmaatụ, njehie "Mpịakọta Nke Mbụ", nwere ike itinye onye ọrụ na-enweghị uche na njedebe nwụrụ anwụ, n'ihi na tupu nke ahụ ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma. Nsogbu a anaghị ebili ma ọ bụrụ na ọ bụ ncha. Ma ọ nwere ike ịme ka ọ dịrị mfe.
Ihe kpatara njehie
Emekarị njehie a mgbe ebudatara faịlụ ahụ ebudatara faịlụ ma ọ bụ kwaga. Nsogbu ọzọ nke olu a na-enweghị mmetụ nwere ike ịpụta mgbe ị na-ebudata iberibe na USB flash drive ma ọ bụ diski na-ewepu ma wepụ ngwaọrụ ahụ n'oge. Otu esi edozie nke a ga-atụle n'ihu.
Usoro 1: BEncode Editor
Mmemme maka ndị ọrụ dị elu. Newbie nwere ike inwe mgbagwoju anya na ntọala. Akụrụngwa a ga-aba uru nye ndị ahụ chọrọ ịmegharị ndị niile metụtara faịlụ iyi na nchekwa ọzọ, nkewa ma ọ bụ disk. Mgbakwunye ya na eziokwu ahụ bụ na ozugbo i setịpụrụ ogige ndị dị mkpa na otu ịpị ị nwere ike ịgbanwe ihe niile n'otu oge, ịchekwa oge dị ukwuu. Usoro nke ịgbanwe ụzọ ga-egosi na ihe atụ Bittorrent, ya mere, ọ bụrụ na ị nwere onye ọzọ inweta, mee ihe na ya.
Download BEncode Editor
Mechie ngwa ahịa ndị ahịa site na ịpị akara ngosi tray na bọtịnụ òké aka na ịhọrọ "Ọpụpụ".
Ugbu a, mezue ya Nweta + R na ide
% APPDATA% BitTorrent
wee pịa "OK".
Na windup popup, chọta ihe a. resume.dat.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta faịlụ a, wee chọgharịa ya n'akụkụ C: Ihe mmemme BitTorrent (na aha nchekwa ahụ, lekwasị anya na onye ahịa gị).
Detuo resume.dat gaa ebe nchekwa ọzọ, otu a ka ị ga - eme nkwado, ma ọ bụrụ na ihe na - adịghị mma, ị ga - enwe usoro ntọala ochie.
Ugbu a ị nwere ike mepee ihe na BEncode Editor. Iji mee nke a, nanị dọrọ ya n'ime window mmemme ahụ.
Họrọ ahịrị na aha .chebe ma hichapụ ya site na iji bọtịnụ ahụ "Wepu".
Soro ụzọ "Dezie" - "Dochie" ma ọ bụ tinye nchikota Ctrl + H.
Na akara "Uru" tinye ụzọ faịlụ ochie, na akara "Dochie" - ọhụrụ.
Ugbu a pịa "Dochie Nile"na mgbe ahụ "Mechie".
Zọpụta mgbanwe na nchikota Ctrl + S.
Na usoro egwu, pịa nri na faịlụ ebudatara ma họrọ na menu ndokwa "Chọpụta ihe egwu" (na ụfọdụ ndị ahịa "Nchọta"). Ya mere, ị na-elele eriri faịlụ, ma ọ bụrụ na a kpaliri ya na mpaghara ọzọ.
Lee kwa: Gbanyụọ njehie gị "ụda na-aga n'ihu abughi"
Usoro 2: Họrọ ebe dị iche iji chekwaa faịlụ
Ị nwere ike ime nke ọzọ ma ghara iji mmemme dị iche iche, karịsịa ma ọ bụrụ na i nweghị ọtụtụ nbudata. Na iyi mwube enwere ọrụ nke ịhọrọ ebe ọzọ maka faịlụ dị iche.
Na usoro ihe omume ahụ, pịa na nbudata na njehie, pịa aka nri. Na menu, hichaa "Di elu" ma họrọ "Bulite ka ...".
Kọwaa ebe nchekwa ọzọ, ọkacha mma na ụgbọala na-enweghị ike iwepu, ya bụ, na diski ike dị n'ime.
Zọpụta ihe niile ma chere na sekọnd ole na ole.
Nzọụkwụ 3: Nbudata faịlụ na mbanye na-ewepu
Ọ bụrụ na ewepụrụ ngwaọrụ ebupụ tupu ebudatara faịlụ ahụ kpamkpam, ị nwere ike ịnwale ibu ya.
Debe faịlụ nsogbu ahụ.
Jikọọ na kọmputa ahụ mbanye nke nbudata ahụ mere.
Mgbe ịmechara mmekọrịta, nọgide na nbudata.
Ugbu a, ị maara otú ị ga-esi dozie njehie ahụ "A naghị etinye ụda nke mbụ." Nke a anaghị esiri m ike ime, dịka o nwere ike iyi, n'ihi na o yiri ka ị ga-achọ ụzọ abụọ ikpeazụ dị mfe.
https://termotools.com ig.termotools.com © Kaadị vidiyo 2019